खुसिको खबर : नेपालमा ह्वात्तै घट्यो कोरोना परिक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क ! – Life Nepali
खुसिको खबर : नेपालमा ह्वात्तै घट्यो कोरोना परिक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क !
काठमाडौं – शुल्क लिएर कोभिड–१९ आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको एक निजी प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ । सरकारले तोेकेको शुल्कभन्दा एक हजार कममा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको सो प्रयोगशालाले अनुमति पाएको एक साता नबित्दै परीक्षण शुल्क प्रतिस्वाब रु ५०० ले घटाएको हो । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous BREAKING- प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै गरे यस्तो घोषणा, हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह !
Next OMG आज एकैदिन देखिए यतिधेरै कोरोना संक्रमित !